अनौठो प्रेमकथा (नेपाली उपन्यास - प्रदीप नेपाल) रमेश विकलको भूमिका सहित
Topic: अनौठो प्रेमकथा (नेपाली उपन्यास - प्रदीप नेपाल) रमेश विकलको भूमिका सहित
Author Topic: अनौठो प्रेमकथा (नेपाली उपन्यास - प्रदीप नेपाल) रमेश विकलको भूमिका सहित (Read 2184 times)
« on: March 19, 2018, 06:30:48 AM »
प्रेम कथाहरू मेरो रूचीका विषय होइनन्। प्रेमलाई केन्द्रविन्दु बनाएर २०२४/०२५ सालमा लेखेका तीन चार कथाहरूलाई मैले त्यतिबेलै नष्ट गरिदिएको थिएँ। यद्यपि त्यतिबेला प्रेममा आधारित कथा उपन्यासहरू नै बजारमा बाक्लरी छरिएका थिए। जनताको दुःखसुखको जीवनसँग जोडिएका कथाहरू विशाल महासागरमा कताकति देखिने टापुहरू जस्ता मात्र लाग्थे। म हिन्दी पनि पढ्थेँ त्यतिबेला। हिन्दीमा प्रख्यात मानिएका उपन्यासकार गुलसन नन्दाका प्रेम कहानीहरूले तर मलाई कहिल्यै छोएनन्। नेपाली उपन्यासकार युधीर थापाका प्रेममय उपन्यासलाई पनि मैले कलेजमै छोडेर हिँडेको थिएँ। त्यतिबेलै विदा दिइएका प्रेमकथाहरू फेरि मेरो जीवनमा भित्रिनै पाएनन्। राजनीतिमा बेस्सरी हेलिएको हुनाले शायद प्रेम पनि मेरा लागि राजनीतिको पेचकिला नै हुनपुग्यो होला। यद्यपि यही नै एकमात्र कारण हो भन्ने निष्कर्ष अहिले नै निकाल्नु उचित नहोला।किनभने क्रान्तिकारी भैरहँदा पनि मैले शरतचन्द्र चटर्जीका बाङ्ला प्रेम कहानीहरू पढेको छु। शरतचन्द्रको चर्चित प्रेम उपन्यास देवदास मैले स्कूले जीवनमै पढेको थिएँ। शरतचन्द्रलाई कुनै पनि प्रगतिवादी साहित्यकारले मन पराएको थाहा पाएको छैन मैले। तर तिनी मेरा आख्यान गुरूहरू मध्यका एकजना हुन्। मैले तिनका सबै उपन्यासहरू पढेको छु र श्रीकान्त उपन्यास दोहोर्‍याएरै पढेको छु। उनका उपन्यासहरूको प्रेमचर्चा सम्पूर्ण मानवीय संवेदनामा उनिएको हुन्छ। उनको उच्च सम्प्रेषण पढिसकेको हुनाले पनि हुनसक्छ नेपालीमा लेखिएका प्रेम कहानीहरू पढिरहने धैर्यता मभित्र उमि्रन सकेन। यसो भनेर मैले नेपाली साहित्यका बारेमा अन्यथा टिप्पणी गरेको नठानियोस्। मैले साहित्यकारकै हिसाबले सत्य बोलेको हुँ। नेपाली प्रेम कथाहरूले किन त्यो उचाइ लिन नसकेका हुन् मैले जान्न सकिन। आफ्नो क्षेत्र नभएको हुनाले त्यसप्रति मैले गहिरो जानकारी राख्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लागेन। तर जीवन प्रेममय हुनुपर्छ भन्ने हो भने प्रेमको साहित्यचर्चा पनि हुनैपर्छ। फ्योदोर दोस्तोएभ्स्की
अथवा एन्तोन चेखवका प्रेमकथाहरू सुन्दर लाग्छन् पढ्न र सुन्न समेत। हामीसित किन छैनन् प्रेम गाथाहरू ! अहँ थाहा छैन मलाई।
प्रेम कथाहरूमा मैले धेरै पहिले पढेको, मन पराएको र अहिलेसम्म आफ्नो मानसमा जीवित रहेको कथा हो, नेपाली साहित्यका अग्रज र जीवनोपयगी कथाका सिद्धहस्त आख्यानकार रमेश विकलद्वारा लिखित “फुटपाथ मिनिस्टर्स”। प्रेम, करूणा र गरीवीको त्यति सुन्दर चित्रण मैले फेरि पढ्न पाएको छैन। जनताको दुःखसुखसँग जोडिएर जन्मिएको त्यो प्रेमकथाको उचाइलाई छुनसक्ने अरू कथा छन् कि छैनन् म भन्न सक्दिन। स्वयम् कथाकार रमेश विकलले त्यसपछि त्यो उचाइ छुने कथा लेख्नुभएको छैन अथवा मैले पढ्न पाएको छैन। कथा लेखनमा म रमेश विकलको असल शिष्य हुन चाहन्छु। तर फुटपाथ मिनिस्टर्सका कलिला पात्रहरूको प्रेम, द्वेष र करूणालाई पछ्याउन सक्ने कथा खै कहिले लेख्न सकुँला र म! र पनि एउटा प्रेम कथालाई मैले उनेकोछु यतिबेला। प्रेमरसको यसमा अभाव होला। आफ्नो कमजोरीलाई म बेलैमा स्वीकार्दछु। तर जीवनसँग जोडिएको प्रेमलाई सबै प्रगतिशील श्रष्टाहरूले उच्च महत्व दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो आग्रह पनि म सबैसामू पस्किन चाहन्छु।
मलाई कथा लेख्न सिकाउने र सकेसम्म कथामा लागिरहन प्रेरित गरिरहने रमेश विकललाई म दाजु भन्छु। पैँतीस वर्ष अघि घनिष्ट सान्निध्य पनि पाएको थिएँ मैले। उहाँकै प्रत्यक्ष शिक्षामा मैले एकाध व्यक्ति व्यक्तिको जीवनी पनि लेखेको थिएँ। तर मैले उहाँसँगको सम्बन्धलाई आफूसँग सिधै गाँस्न सकेको थिइन। यही गाँठोका लागि मैले प्रस्तुत उपन्यासिकाको भूमिका लेखी दिनुहुन अनुरोध गरेँ। उहाँको स्वास्थ्य साह्रै राम्रो छैन, उमेरले पनि गाल्दै लगेको छ। उहाँ आफ्नै सिर्जनाहरूलाई सक्याउन हतार गरिरहनु भएको छ।
तथापि मैले रमेश विकललाई मेरो पुस्तकमा छापेरै छोड्छु भन्ने अठोट गरेँ। फेरि पनि कथाकार रमेश विकलले आफ्नो सानो भाइलाई सघाइदिनु भयो। मैले यो सानो उपन्यासको शीर्षक राखेको थिएँ “अनौठो प्रेम कहानी”। अहिले यो भएको छ “अनौठो प्रेम कथा”। नेपालीपनको सुन्दरता थप्ने यो शीर्षकका बारेमा पाठकले स्वयम् रमेश विकलको भूमिकामा जानकारी राख्नु हुनेछ। आफ्नो ब्यस्त समयलाई एकछिन छेउमा थन्क्याएर दाजु रमेश विकलले लेखिदिनु भएको उर्जावर्धक भूमिकाका लागि आभार प्रकट गर्दछु।
साउन २८, ०६३
Re: अनौठो प्रेमकथा (नेपाली उपन्यास - प्रदीप नेपाल) रमेश विकलको भूमिका सहित
« Reply #1 on: March 19, 2018, 06:31:10 AM »
साँच्चै अनौठो प्रेम कथा
केही दिन अगाडि एउटा ‘उपन्यासिका’ को पाण्डुलिपि (यसलाई पाण्डुलिपि पनि भन्न नमिल्ला, किनभने यो कम्प्युटर टङ्कणलिपिका रूपमा छ) पढेँ – “अनौठो प्रेम कहानी” प्रदीप नेपाल लिखित। प्रदीप नेपाल आज एक सफल राजनीतिकर्मीका रूपमा उभरिएर देखा परेको छ। त्यसैले उसलाई मूलतः एउटा राजनीतिकर्मीकै रूपमा (नेतृत्व तहमै पुगेको) चिन्ने गर्छन् मानिसहरू।
तर उसको अर्को एउटा पहिचान पनि छ – कथाकार–उपन्यासकारको। यसरूपमा उसलाई चिन्ने धेरै नै होलान्, र छन्। एउटा उल्लेख्य संख्यामा उसलाई साहित्यकार (कथाकार–उपन्यासकार) का रूपमा चिन्ने र पढ्ने पाठककको वर्ग छ। हो, कतिपयले उसलाई प्रदीप नेपाल साहित्यकारका रूपमा नजानेर (त्यसो त राजनीतिक लेखकका रूपमा त धेरैले जान्दछन् नै) अर्कै नाउँबाट जान्लान् – कथाकार–उपन्यासकार सञ्जय थापा।
हो, उसको साहित्यिक अभियान सञ्जय थापाको नाउँबाट शुरू भएको प्रतीत हुन्छ। मलाई के थाहा छ भने सञ्जय थापाको नाउँबाट लेख्नु उसको वाध्यता थियो (शायद पार्टी भूमिगत हुँदाको वाध्यता)। तर उसको साहित्ययात्रा उसको किशोर अवस्थादेखि नै एउटा पाठक र लेखककै रूपमा शुरू भयो। किनभने उसलाई आज मात्र होइन, धेरै अघिदेखि – २०३६ साल भन्दा अगाडिदेखि नै एउटा प्रतिभाशाली नवयुवाका रूपमा धेरै नजिकबाट चिन्दछु।
म त्यतिखेर शिक्षा विभाग अन्तरगतकै एउटा प्रमुख संस्थामा कार्यरत हुँदा उ पनि त्यससँग सम्वन्धित थियो र हामी सँगै काम गर्थ्यौं। एक त त्यो संस्था नै साहित्य र शिक्षासँग सम्वन्धित हुनाले त्यहाँको वातावरण नै शैक्षिक, साहित्यिक थियो दोस्रो, प्रदीप पनि त्यस्तै परिवेश (सत्सङ्ग) बाटै आएको हुँदा उसको साहित्यप्रति सामान्य भन्दा बढी रूची देखिन्थ्यो। त्यसैले ऊ आफ्नो व्यवसायिक (कार्यालयीय) कामबाट फुर्सत पायो कि (निकालेरै पनि) केही न केही कोर्ने गर्थ्यो। उसले त्यसरी नवशिकारूका रूपमा कोरेको केही रचनाहरू मैले पनि हेर्ने मौका पाउँथे।
त्यही प्रदीप नेपाल सञ्जय थापाका रूपमा पल्लवित र स्थापित हुँदै आज राजनेतृत्वको अति व्यस्त र जटिल पेसाबाट पनि समय निकालेर साहित्यसाधनामा रमाउन रूची राखेको देख्ता मलाई आनन्द आउँछ।
र म त्यत्तिकै कल्पना गर्न थाल्छु – यो केटाले बाँझो राजनीतिको मैदानमा नहाम्फालेर साहित्यकै रमणीय
बगैँचामा, मालीका रूपमा साधना गर्दो हो त आज नेपाली साहित्यले कति सुन्दर सुन्दर, कृति अनमोल अनमोल साहित्य सुमन फुलाउँदो हो, साहित्यको फूलबारीलाई कति सजाएर चम्काउँदो हो, कतिलाई आनन्द दिँदो हो!
तर यो सम्भव हँदु ैन। सबैले साहित्य बगँैचाको माली बनेर राजनीतिक जङ्गलतिर नहेर्ने हो भने त्यो फाँट त त्यसै आजको भन्दा पनि कुरूप झाडी बन्न सक्थ्यो, घोर अरण्य पनि बन्न सक्थ्यो। त्यसैले त्यसलाई समाल्ने – त्यो खेती (राजनीतिक खेती) लाई स्याहारसुसार गर्ने, गोडमेल र मलजल गरेर उर्वरा धर्ति तुल्याउन कोही न कोहीले कम्मर कस्नै पर्थ्यो। तर त्यो चाहिँ स्वःका लागि नभएर समग्र जनवर्ग, राष्ट्र र देशप्रति समर्पित हुनुपर्ने – यो ब्रतको पालनाचाहिँ पहिलो प्रतिबद्धता, पहिलो सङकल्प हुन पर्ने र त्यसलाई पालना गर्ने इमानदारी हुनुपर्ने प्रमुख शर्त हो। त्यो कुराको चाहिँ अहिले न्यूनता खड्किएको छ। त आज त्यही राजनीतिको उद्यानको फोहरमैला सफा गर्न भनेर तम्सेको एकजना प्रतिबद्ध नेताको कलमबाट यो उपन्यासिका ‘अनौठो प्रेम कहानी’ (शीर्षक ‘कहानी’ को सट्टा ‘कथा’ भैदिएको भए बढी नेपाली हुँदो हो) को कोशेली लिएर आफ्ना पाठक समक्ष आएको छ। प्रथम त यसको शीर्षक नै आकर्षक र कौतुहल जगाउने खालको बनेको छ। ‘… कस्तो अनौठो प्रेम कथा हो त यो? …’
सामान्यतया हामी साहित्यमा, सिनेमामा अनगिन्ती प्रेम प्रसङ्गहरू पढदै, हेर्दै आएका छाँै। ती कथाहरूमा एकजना नायक हुन्छ, एउटी नायिका। (अझ अधिकांश सिनेमा र कथाकृतिहरूमा त खलनायक (भिलेन) पनि हुन्छ। नायक पुरूष र नायिका स्वतः नारी हुन्छे र ‘प्रेम’ भन्ने बित्तिकै हाम्रो मानसिकताले तुरून्तै पुरूष र नारी बीचको यौनजन्य ‘प्रेम’ भन्ने कुरालाई पक्डिइहाल्छ। हाम्रो कुसंस्कारयुक्त मनले ‘प्रेम’ शब्द अति पवित्र हुन्छ र यसको रूप, दाजुबहिनी, दिदीभाइ, आमाछोरा, बाबुछोरा, साथीसाथी बीचमा पनि फूलेको हुन्छ र त्यो फूल जत्तिकै पवित्र र सुन्दर हुन्छ भन्ने कुरालाई ग्रहण गर्नै सक्तैन – सकिरहेको छैन। (हो, नवपुस्तामा भने त्यो नयाँ धारणाले सनै सनै ग्राह्यता पाउँदै आएको, तर रूढीगत संस्कारको अवशेष अझै पूर्ण पुछिइनसकेको परिप्रेक्षमा यो अझै संशयकै स्तरमा, धरमरकै बिन्दुमा अड्किएको छ।) पुरानो संस्कार अनुसार प्रेमकथामा नायक नायिका बीचको प्रेमप्रसङ्ग नितान्त नारीपुरूषको यौनजन्य आकर्षण (फ्रायडवादी चिन्तनजन्य) मा नै रूमलिन्छ। त्यसमा मुख्य वियोगका आँसु अथवा मिलन (योग) का हाँसोले नै ओतप्रोत हुन्छ अन्त्यसम्म। (खलनायक समेत रहेको प्रेमकथाको संयोगान्त र वियोगान्तमा चाहिँ त्यसको कारणीमा त्यही खलनायकले दुष्ट भूमिका खेल्छ। कथा त्यो त्रिकोणात्मक भएर आदिदेखि अन्त हुन्छ।)
त्यस्तो आख्यान परिपाटीलाई आत्मसात गर्दै हुर्केका पाठक समाज माझ प्रदीपको प्रस्तुत ‘अनौठो प्रेमकथा’ ले साँच्चै अनौठो नै प्रभाव छोड्छ। किनभने यस आख्यानका नायक ‘प्रिय’ र नायिका ‘चाँदनी’ परम्परागत (मात्र के भन्नु आधुनिक नाउँ भिरेर जन्मिएका तर पुरातन सांस्कारिक परिधीबाट पूरै बिलग हुन नसकिरहेका पनि) जस्ता पटक्कै्र छैनन्। उनीहरू नत हिजोआजका बलिउड, कलिउडका ‘हिरो हिरोनी’ जस्ता एकान्त उपवन, बगैँचा वा धान, गहुँ, चनाका हरियालीपूर्ण खेतहरूमा ‘उन्मत्त ‘बानरे’ उफ्राइ’ गर्दै लखेटालखेट गर्दै उत्ताउला सस्ता गीतहरूका बेताले रागका सुरमा अर्धनग्न भएर एक अर्कासँग दशैँको पीङको लठारो झैँ लठारिँदै सस्ता दर्शकहरूलाई पनि योनोत्तेजनामा जुरूक् जुरूक् पारिरहेका हुन्छन्, न आदर्श र चोखो प्रेमका नाउँमा कुनै नदी किनारा वा सागरतटका किनारका चट्टानमा बसेर बिरहका आँसुमा भिजेको रूमानी गीत गाएर भावुक दर्शकहरूलाई पनि आँसुमा डुबाउने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन्। अझ साँच्चै भन्ने हो भने अठ्ठाइस, ‘ए फोर साइजको’ आफ्नो प्रियतमलाई चिठ्ठी शैलीमा लेखिएको दश दिनको दैनिकी (डायरी) भरमा परिभाषित प्रणय प्रेमको प्रसङ्ग ‘प्रिय’ ले आफ्नी पे्रयसी चाँदनीलाई लेखेको चिठी (यो पाण्डुलिपिको १३–१४–१५ पृष्ठ) को अन्तिम केही अनुच्छेदबाट मात्र प्रत्यक्षरूपमा अनुभूत हुन्छ। यो चिठी पाँच वर्ष पहिले चाँदनीको ‘प्रिय’ नायकले आफ्नी प्रेयसी चाँदनीको नाउँमा लेखेको हुन्छ। चाँदनीले त्यसलाई जतनसँग राखेकी हुन्छे र यसो न्याश्रो लागेको अथवा ‘प्रिय’ को सन्निकटताको तीब्र चाहना भएको घडीमा मात्र झिकेर पढ्ने गर्छे।
यसो भनेर यो उपन्यासिकामा विपरीत लिङ्गीमा हुने नैसर्गिक प्रेम–प्रणयको प्रसङ्ग हुँदै नभएको होइन। आदिदेखि अन्त्यसम्म ‘प्रेमतत्व’ ले नै त सिञ्चित छ यो। तर त्यो प्रेम हिजोआजको समाजमा प्रचलित प्रेम–प्रणयको परिभाषा भित्र पर्दैन, जुन वियोगको उच्छ्वासबाट व्यक्त हुन्छ नत संयोग र मिलनको उमङ्गमा। यो न फ्रायडको परिभाषामा व्यक्त हुन्छ नत कालिदासकै मेघदूतमा। हीरराँझामा पनि व्यक्त हुँदैन, रोमियो जूलियटमा पनि। यो आजको शताब्दीका राजनीतिक चेतनायुक्त दुई शिक्षित पारिवारिक र सामाजिक वातावरणले निर्माण गरेका स्वयं सचेत र शिक्षित युवा युगलको प्रेम कथा हो। त्यसैले यो माटो (देश, धर्ति) को ममतामा अभिव्यक्त भएको छ, समाजको पीडामा बोलेको छ, राजनीतिक वितण्डामा संवेद्य भएको छ।
समग्रमा भन्दा यो कथा मानवीय संवेदना, देशप्रेम, जातीय (राष्ट्रिय) ममत्वमा प्रस्फुटित भएको छ। यसमा
प्रेमैप्रेम छताछुल्ल भएर बगेको छ। त्यसैले यो ‘प्रेम कहानी’ हो र यसलाई प्रचलित ‘प्रेम’ का कथा पढ्नेका आँखामा यसमा कुनै प्रेम प्रणय प्रसङ्गै छैन। त्यसैले यो प्रेम–कथा नै होइन। त्यसैले समग्रमा यो ‘अनौठो प्रेम कथा’ हो। यसको यही ‘अनौठोपन’ नै यसको आकर्षण हो र यसैको चिन्तनशीलताले नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
र यही ‘अनौठोपन’ प्रतिको जिज्ञासाले नै पाठकको मनोरञ्जन साथै उसमा उत्सुकता जगाउँछ। शैली र प्रस्तुतिको अनौठोपनले पाठक अलि अलमलिए पनि त्यसलाई खोतल्ने जिज्ञासाले सचेत पाठकले यसलाई माया गर्नेछ। अस्तु, म भाइ प्रदीपको यस मूल्यवान प्रयासलाई साधुवाद दिन्छु। र उसले यस्तै लोकचेतनालाई उजिल्याउने, जनताकै सुखदुःखलाई बोकेर राष्ट्रिय चिन्तनलाई फैलाउने साहित्य, – कथा, उपन्यास र सम्भव भए नाटक निबन्धको सृजना गर्दै, नेपाली साहित्य भण्डारको श्रीवृद्धि गर्दै जावस्।
एउटा दाजुका नाताले म उसलाई साधुवादका साथै आशीर्वादका वचन पनि प्रदान गर्छु। र विश्वास
र आशा पनि गर्छु उसको कलम झन झन प्रखर र जनभावनालाई बहन गर्न सक्षम र सक्रिय हुँदै जावस्।
उ कर्तव्यपथमा कहिल्यै नथाक्ने, कहिल्यै नहार्ने योद्धासरी अगाडि बढ्दै जावस् –– चरैवेति! चरैवेति!!
तमसोमा ज्योतिर्गमय! असतोमा सद्गमयः! मृतयोर्मा अमृतंगमयः!!
« Reply #2 on: March 19, 2018, 06:31:27 AM »
२६ साउन २०६३
नत नदी भन्न मिल्थ्यो त्यसलाई न नाली नै। त्यहाँ बग्ने पदार्थलाई पानी भन्न मिल्दैनथ्यो त्यसैले त्यो नदी थिएन। तर त्यो ठूलो नालीमा पानीको मात्रा बढी थियो, त्यसैले त्यसलाई पानी होइन पनि भन्न हुँदैनथ्यो। दुइ किनारको बीचबाट बग्ने त्यो पदार्थको रङ्ग फिक्का कालो थियो। त्यसलाई हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो – पुरानो भएर खुइलिएको भक्तपुरे टोपी तरल पदार्थमा रूपान्तरित भएर मैदानमा सललल बगिरहेछ। अथवा तपाईं यसलाई मट्टीतेलको मात्रा बढी भएको डढेको मोबिलको अनुहारमा पनि सम्भि्कन सक्नुहुन्छ। कलौँसो कालो ध्वाँसो लिपिएको पानी जस्तो त्यो तरल पदार्थबाट बेलामौकामा चिताइनसक्नुको दुर्गन्ध ह्वास्स निस्कन्थ्यो। त्यो दुर्गन्धले तपाईंलाई घरैछेउबाट वाफ उडाउँदै बगिरहेको नालिको सम्झना गराउँथ्यो।
हामीलाई जस्तो शायद अरूलाई लाग्दैनथ्यो। त्यसैले त्यसलाई नदी भन्थे मानिसहरू। नदीका छिमेकीहरू मात्र हेाइन, देशभरिका मात्रले पनि होइन, देशावरका मानिसहरू पनि त्यसलाई नदी नै भन्थे। एकखालका मानिसहरू त त्यसैलाई पवित्र नदी भन्थे। त्यसमा नुहाउन पाउदा सिधै भगवानको काखमा बस्न पाइन्छ भन्थे। जति कालो भए पनि त्यहाँको पानीले निधारमा आचमन गर्न पाउदा भगवानको विश्वरूप देखिन्छ भन्थे। आस्थाको त्यो भावनालाई सम्मान गर्दै यो आख्यानमा त्यसलाई नदी नै भनिनेछ। तपाईं आफ्नो इच्छाले त्यसको नाम राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसलाई वागमती भन्नुस, या विष्णुमती अथवा इच्छुमती भन्नुस्। भन्नै रहर लाग्छ भने तपाईं त्यसलाई कोशी या नारायणी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। आखिर नदीभन्दा ठूलो नदीको नाम पनि त नदी नै हुन्छ।
अहिले सजिलोको लागि हामी त्यसलाई नदी मात्र भनौं।
कथा काठमाण्डौकै हो। काठमाण्डौलाई मित्रराष्ट्रसँग जोड्ने एउटा राजमार्ग छ। त्यो तपाईं हामी सबैले जानेकै कुरा हो। त्यही राजमार्गमा चिप्लिन थाल्नुपर्छ त्यहाँ पुग्न। राजमार्गको पातलो ओरालोमा, उत्तरतिर लाग्ने एउटा राम्रो बाटो भेटिन्छ। त्यसलाई तपाईंले नै कुनै एउटा नाम दिनुभए हुन्छ। शान्तिमार्ग भने पनि भो, प्रजातन्त्र गोरेटो भने पनि भो। मनले मान्छ भने अशान्ति उकालो अथवा अप्रजातान्त्रिक ओरालो भने पनि हुन्छ। बाटो सिधा छ, कतै नमोडिएको कतै नबटारिएको।
सिधा पांच सय मिटर अगाडि गएपछि त्यो बाटो देब्रेतिर कुइंक्क घुम्छ। त्यसलाई नछोड्नोस्। तपाईंको नाक अघिल्तिर एउटा मन्दीर शैलीको सेतो घर ठिङ्ग उभिन्छ। तलदेखि माथिसम्म नियालेर हेर्नुस्, बुङमती र भक्तपुरमा बनेका प्राचीन शैलीका झ्यालढोकाले सिंगारिएको त्यो घरभित्र चौबिसै घण्टा जीवन प्रवाहित भैरहन्छ। त्यो ब्युझिरहन्छ – तर चौबिसै घण्टाको अनिदोका कारण त्यसका आँखाहरू शंकर लामिछानेले वर्णन गर्नु भएको अधर्धमुदित नयन जस्तै देखिइरहन्छन्।
भुईं समेत जोड्दा त्यो घरमा पाँच ओटा तलाहरू छन्। भुईं तलाको बारेमा सबैभन्दा पुछारमा भनौँला। पहिलो तलामा हाजिरकापी, हिसाबकिताब, जोडघटाउको काम हुन्छ। त्यसलाई प्रशासन शाखा भनिदिए हुन्छ। दोश्रो तलामा एउटा ठूलो सभाकक्ष छ, त्यसको आडैमा अर्को सानो सभाकक्ष पनि छ। ठूलो सभाकक्ष वक्तामञ्च र श्रोतामञ्चमा बाँडिएको छ भने सानो सभाकक्ष अण्डाकार टेबल ओरिपरि छरिएर सुतेको छ। तेश्रो तलामा एकातिर छन् बग्रेल्ती कम्प्युटर र त्योसँग खेल्ने भाइबैनाहरू। त्यसको अर्कापट्टी छन् सम्पादक र उपसम्पादकहरू। चौथो अर्थात सबैभन्दा माथिल्लो तलामा बस्छन् कम्पनीका अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष, सचिव अनि कार्यकारी निर्देशकहरू।
कथा त्यही घरको भुइँ तलोबाट शुरू हुन्छ। त्यो तलो संगमरमरको सेतो र चिल्लो ढुङ्गामा थचक्क बसेको छ। अग्लो छत छ भुइंतलाको – काठमाण्डौका लागि पटक्कै नसुहाउने। १४ फिट अग्लो। छतमा कलाकारिता समेटिएको छ। तर बिहारी कलाकारको भएर होला – न त्यसमा भारतीय कलाको सुन्दरता छ, न नेपाली कलाले नै त्यहाँ रमाउने मौका पाएको छ। रङ्गीचङ्गी बुटाहरू छन् छतमा। तर ती बुटाहरूसँग दिङला जाने बाटोमा पर्ने तीनतलेको चित्रगुप्तको कलात्मक घरका कलाकृतिहरूको जस्तो सुन्दरता कतै छैन । यो त कला होइन, एक्कासी चमिकएको चट्याङ्गको उज्यालो जस्तो छ – आँखा खाने गरी चरक्क चर्किएको
रङ्गले विरक्तिएर संगमरमरको भुँइ नियाली रहे जस्तो।
संगमरमरमा पल्टिएको भुइँतलो, आफ्ना उदास र चिसा आँखाले तपाईंलाई ढोकामा स्वागत गर्न आइपुग्छ।
अनौठो ढङ्गले खाली देखिन्छ त्यो भुईं कोठा। हुनेखाने मान्छेको घरमा उभि्रएर फ्यालिएको कोठा जस्तो। मुलढोका साह्रै फराकिलो छ। ढोकाको सिधा भित्तामा अग्लो टेबल र त्यस्तै कुर्ची देखिन्छन्। कुर्चीको दाहिने तिर साँघुरो बिजुलीभर्‍याङ छ। (काठमाण्डौमा फराकिला बिजुलीभर्‍याङहरू नयाँ शताब्दीसँगै बढी प्रयोगमा आउन थालेका हुन्।) बिजुलीभर्‍याङको आडैमा माथि जाने सिमण्टीको भर्‍याङ छ। भर्‍याङको पल्लो
छेउमा अग्लो घरको भित्तो छ। त्यसरी दाहिने तिरको लङ समाप्त हुन्छ।
कुर्चीको देब्रेतिर पनि फराकिलो ठाउँ छ। फराकिलो ठाउँको बीचमा एउटा गोलो टेबल र चार ओटा त्यसलाई सुहाउदिला तर सादा प्लाष्टिकका कुर्चीहरू छन्। टेबल माथि छरपस्टिएका अखबारहरू छन्। केही पत्रिका पनि छन्। हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ – भुईंतलामा चार जना मानिसलाई मात्र बस्ने गरी स्वागत गरिन्छ। त्यसैले आमरूपमा आगन्तुकहरू रिसेप्सनमा उभिएर कुरा गर्छन् र आफ्नो काम सकेर हिंडिहाल्छन्।
कति राम्रो व्यवस्था!
यही राम्रो व्यवस्था सम्हालेर भुर्इंतलाको कुर्चीमा बस्ने, घरको बारेमा सोधपुछ गर्न आउने जो कोहीसँग पनि मुसुक्क हाँसेर बोल्ने, एक घण्टामा दर्जनौं टेलिफोनको जवाफ दिने कर्मचारी नै प्रस्तुत
उपन्यासकी नायिका हो ….
« Reply #3 on: March 19, 2018, 06:36:46 AM »
जेठ ४ गते
उज्यालो आकाशमा पनि ताराहरू देखिएका छन् आज। छासछुस पानी परे पनि अझै बर्खा लागिहालेको छैन। त्यसैले मैले आज घरको छतमा धेरैबेर बिताएँ। म छतमा चढ्दा साँझको आठ बजेको थियो। भरखरै अँध्यारो ओर्लिन थालेको थियो धर्तीमा। गोदावरीबाट उकालो चढेर फुलचोकीको टुप्पामा पुगेपछि थाकेको मान्छे जसरी पूर्णचन्द्रको टिका लाउन हिंडेको जुन खुइखुइ गर्दै आकाशको उकालोमा चढिरहेको थियो। आकाश, गीतहरूमा वर्णन गरिएको जस्तै कञ्चन थियो। अहं, एक टुक्रो बादल पनि थिएन कतै। जुनको उज्यालो, घरको छतमा असरल्ल परेर छरिएको थियो। तर आकाशमा ताराहरूको बिस्कुन छरिएको हुनाले भुईंको जुन आकाशका ताराहरूको बिस्कुनमा हराए जस्तो लाग्थ्यो।
आकाश शितल थियो कि धर्ती शितल भएको हो भनेर धेरैबेरसम्म मैले छुट्याउन सकिन। छिनछिनमा सिर्सिर् बतास चल्थ्यो। त्यो हिमालबाट ओर्लिएको हो कि आकाशवाट झरेको हो छुट्याउनै सकिदैनथ्यो। जेठ महिनाको गर्मीले काठमाण्डौलाई कस्तरी समात्न थालेछ होगि?
केही साल पहिले हामी आलापोटको हाइस्कूलमा पढ्थ्यौं। विद्यार्थी र शिक्षकहरू बीचको सम्बन्ध आज जस्तो व्यापारिक भैसकेको थिएन। शिक्षकहरू कक्षा कोठामा पैंतालिस मिनेट बिताउनुलाई आफ्नो दायित्व निर्बाह ठान्दैनथे। शिक्षकहरू, बाबु हुन्थे, आमा हुन्थे, दाजु र दिदीहरू हुन्थे। विद्यार्थीप्रति ठूलो जिम्मेदारी महसुस गर्थे। शिक्षकले विद्यार्थीलाई आफ्नै सन्तान ठान्थे, आफ्नै भाइबैना ठान्थे।
अहो, कति सुन्दर सम्बन्ध थियो शिक्षक र विद्यार्थीको त्यो!
सोनाम सर हामीलाई विज्ञान पढाउनु हुन्थ्यो। आजभोलि उहाँलाई मैले कुनै स्कूलको शिक्षक भएको सुनेकी छैन। शिक्षकहरूको कार्यक्रमका समाचारमा पनि उहाँ लेखिनु भएको छैन। औंसीको आसपासका रातमा सोनाम सर, हामी विद्यार्थीलाई स्कूलको आँगनमा बोलाउनु हुन्थ्यो। कहाँ हुनुहुन्छ सोनाम सर आजभोलि? त्यतिबेला हामी विज्ञानमा रूची राख्ने विद्यार्थीहरू चाँडै भात खाएर चहुरमा भेला हुन्थ्यौं। सर हामीलाई आकाशका ताराहरू देखाउदै तिनको चिनारी दिनुहुन्थ्यो। सप्तर्षीलाई मैले त्यसैबेलादेखि चिन्न थालेकी हुँ। उल्टो प्रश्नचिन्ह जस्तो त्यो तारा समूह शुन्य आकाशमा सधैं हेरिरहन मन लाग्ने खालको हुन्थ्यो । सोनाम सरले नै मलाई त्रिकुटीको तेर्सो धर्सो चिनाउनु भएको हो। उत्तरी धु्रवको नजीक बसिरहेको जस्तो लाग्ने ध्रुव ताराको मसिनो टिकोलाई मैले त्यसैबेलादेखि ठम्याउन थालेकी हुँ। ठम्याउनै गाह्रो पर्ने ध्रुव तारो चिनाउन सरले पाँच ओटा रात बिताउनु परेको थियो।
तर आजको रात औंसीको रात थिएन। आज त पुर्णिमाको सेरोफेरो थियो। यति हुँदाहुँदै पनि मैले विज्ञानको सरले पढाउनु भएको त्यो रातलाई सम्भि्कएँ। परम्परामा रगत जसरी भिजेको माया कहाँ गयो हँ? के जीवन व्यापार मात्रै हो? सम्भि्कदा सम्भि्कदै मेरो मन रोयो। बेस्सरी टाउको झड्कारें मैले। केको सम्झना भयो? के हामीले गुमाउदै गएको आफ्नो सभ्यताको, आफ्नो संस्कारको माया हो यो? “इतिहास फर्किदैन। मान्छेले इतिहासलाई फर्काउने कोशिश गर्‍यो भने, मान्छे जीवनका लागि असान्दर्भिक हुन्छ। इतिहासलाई फर्काउनु भनेको हुर्किएका हामीहरू फेरि बालापनतिर जानु हो, यस्तो कहिले हुन्थ्यो र!” सत्य जान्दा जान्दै पनि मेरो मन धेरैबेर आकाशका ताराहरूसँग तरङि्त भइरह्यो। मलाई मन पर्ने सबैथोक फिर्ता भैदिए हुन्थ्यो जस्तो लागिरह्यो। मेरो बालापन, मेरा साथीसङ्गीहरू, मैले खेलेको मैदान, मैले खेपेको सुख सबै सिनेमाका दृष्यहरू जसरी मनको आँखाबाट सललल बगेर गए। मन हुँडल्लिए जस्तो भयो।
सुख सम्भि्कदा पनि किन मन पिरोलिन्छ?
मन अमिलिन खोजेपछि म पातला पाइला चालेर आफ्नो कोठामा ओर्लिएँ। कोठा बत्तीको उज्यालोमा नुहाइरहेको थियो। तपाईंले एकदिन भन्नुभएको थियो नि! सके बिर्सिसक्नु भयो होला। “घरको कोठामा
गुलाफी रङ्ग लगाउनु, त्यो मन पर्दैन भने कोठामा उज्यालो पहेंलो रङ्ग लगाउनु। यी दुई रङ्गहरू प्रेम, स्नेह, सौहार्दता र फराकिलोपनका सूचक हुन्। दुई रङ्ग मन परेनन् भने सेतो लगाए पनि हुन्छ। त्यो शितलता हो,
एक महिना लागेको थियो मलाई कोठामा रङ्ग लगाउन। बुवाआमाले नमानेर होइन, मैले नै रङ्ग नछानेर त्यति ढिलो भएको थियो। खैरो प्लास्टरको भित्तामा म एकछिन पहेंलो रङ्ग पोतेर नियाल्थें, त्यो मलाई
राम्रो लाग्थ्यो। कहिले देब्रे ढल्किएर, कहिले दाहिने निहुरिएर म रङ्गको फराकिलोपन केलाउन खोज्थें। अहा! कस्तो राम्रो कहिल्यै नछोडौं, नछोडौं जस्तो।
अकस्मात तपाईंको गुलाफी रङ्गको अर्ति मेरो मनमा ठ्याङ्ग गरेर बजारिन्थ्यो। म हतार हतार गुलाफी धर्काहरूलाई भित्तामा पोख्थें। त्यो झन सुन्दर देखिन्थ्यो। सेतो रङ्गको त कुरै भएन। विद्यार्थी हुँदादेखि नै मलाई सेतो मन पर्थ्यो। म पाएसम्म सेतो रङ्गको लुगा लाउथें।
मैले रङ्ग छान्न सकिन। एकदिन दाईले भन्नुभयो, “यो टिकाका दिन हामीले घर सर्नैपर्छ। यो केटीले रङ्ग नछानेर हैरान पारी। यसलाई मन पर्ने भनेको पहेंलो, गुलाफी र सेतो हो। पहेंलो र गुलाफीलाई मिलाउदा सेतो हुन्छ भन्ठानेर अब कोठाहरूमा रङ्गरोगन सिध्याउनु पर्छ। सबै कोठामा सेतो रङ्ग लगाउनु पर्छ । कोठा उज्यालो हुन्छ,। मैलो लाग्यो भने पनि तुरून्तै देखिन्छ,। सरसफाइ गरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यही ठीक हुन्छ।”
ठूलो समस्याबाट पार पाए जस्तो लागेको थियो त्यतिबेला। मैले खुशी भएर दाइलाई गम्लङ्ग अँगालो हालेकी थिएँ। दाजुबैनीको पिरती देखेर बुवाआमा दङ्ग पर्नुभएको थियो।
अरूबेला सेतो रङ्गको महत्ता यति साह्रो अनुभूत गरेकी थिइन। घर बनाएकै पनि त पाँच वर्ष भैसक्यो। तीन वर्ष भनेको एक हजार भन्दा बढी रात होइन? त्यत्रो समय बित्दा पनि कोठा कति सेतो छ
भन्ने थाहा हुनसकेको थिएन। घरमा फेरि एकपल्ट रङ्ग थप्नुपर्छ कि भनेर नयाँ वर्षकै दिन कुरा भएको थियो। नपर्ने रहेछ। आज कोठामा पस्नासाथ कोठाको उज्यालोपन देखेर म छक्क परेँ। त्यो त चन्द्रमालाई धर्तीमा
स्वागत गर्न ओछ्याइएको सेतो बादलको बिछ्यौना जस्तो पो देखियो!
कति लामो गन्थन लेख्न मन लागेको होला? तपाईंलाई सम्भि्कएर डायरीमा शव्द कोर्न थाल्दा समय रोकिए कति जाती हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ।
आजको दिन हाम्रा लागि असाध्यै राम्रो रह्यो। छक्क पर्नु भो? काठमाण्डौको एक नम्बर क्षेत्रकी केटी, आजको दिन हाम्रा लागि असाध्यै राम्रो रह्यो भन्छे! तर यो त्यस क्षेत्रकी केटीको खुशी होइन। त्यो
खुशी हो एउटी कर्मचारी केटीको। हामी र संसारका बीचमा कत्ति ठूलो भेद छ होगि? दाइको आँखाबाट बगेको आँशु थामिएको छैन। समाचार सुनेदेखि उहाँको आँखा निदाएको छैन। बुवाले लामो सुस्केरा काढ्दै
भन्नुभो, “असल मान्छेलाई भगवानले धर्तीमा धेरै दिन बस्न दिंदैनन्। चाँडै बोलाउछन्।” आमाले मेरो टाउकोमा हात राखेर भन्नुभएको थियो, “लाखौंलाई रूवायो। यस्तो मान्छे अब नेपालमा कहिले जन्मेला र?”
तर हामीले काम गर्ने घरमा आज खुशी बाँडियो। हामी र दुनियाका बीचमा कति गहिरो खाडल छ भनेर सोच्दा म आफैसँग लजाउने गर्छु। मुलुकको एउटा ठूलो पंक्ति हिक्का छोडी छोडी रोइरहेको छ,
हजारौंका आँखाबाट बगेको आँशुले धाराको पानी सम्झाउछ, तर आज हामी सबै हाँसिरहेका छौं, रमाएका छौं र व्यवस्थापनले हामीलाई आज तीन सय रूपैयाँ बराबरको कुपन बाँडेको छ। हाम्रो ब्यापार यसरी नै
फस्टाइरह्यो भने आगामी महिनादेखि मेरो तलबमा तीन सय रूपैयाँ थपिनेछ। प्रसङ्ग शायद तपाईंले बुझ्नु भयो होला।
नेपाली राजनीतिका एकजना ठूला राजनेताको मृत्यु भयो। दुर्घटना भनिएको छ त्यसलाई। त्यसको सबैभन्दा राम्रो समाचार हाम्रै अखबारले छाप्यो। उज्यालो पनि हुन नपाउदै हजारौं प्रति बिक्यो। तपाईं कल्पना गर्नसक्नु हुन्छ? सक्नुहुन्न। हप्ता दिन अघिसम्म आठ दश हजार प्रति छापिने अखबारले पैंसट्ठी हजारको संख्या नाध्यो। हाम्रा सरहरूको खुशीको ठेगानै भएन। उहाँहरूले पच्चिस तीस हजारसम्मको अनुमान गर्नुभएको थियो। पचासको त कल्पना समेत गर्नुभएको थिएन। तर दोब्बर पो बिक्यो। एकैचोटी ह्वात्तै बढ्यो अखबारको बिक्री। सरहरूले आजको स्टाफ मिटिङमा भन्नुभयो, “यसलाई टिकाउन गाह्रो हुन्छ, तर पनि पचासभन्दा तल झर्न नदिने कोशिश गर्नुपर्छ। बाहिर सबैले शोक मनाउनु पर्छ – तर तपाईंहरूलाई थाहा हेास् – तपाईंहरूको जागीर अब सुनिश्चित भयो। हाम्रो व्यवस्थापनले अखबारलाई चालिस हजारभन्दा तल झर्न दिनेछैन। अब चिन्ता नगर्नुस्। ध्यान दिएर काम गर्नुस्। अखबारलाई उत्कृष्ट बनाउनुस्।” जागीरेका लागि यो सुसमाचार भएन र?
तर यो सुसमाचारलाई म आफ्नै घरमा कसैसँग बाँड्न सक्दिन। यो खबर सुन्ने बित्तिकै बुवाले तेरो बुद्धि छोटो र आयु लामो होस् भन्नु हुनेछ,। त्यतिबेला मलाई जन्माउने आमाले भन्नुहुनेछ – तेरो मृत्युमा हामी कसैको आँखामा आँशु आउने छैन। दाइले आजसम्म गरेको मायाको ब्याज समेत चुक्ता हुने गरी गालामा चर्को चड्कन दिनुहुनेछ। उहाँको हातको चुटाई परेको मेरो गालाको सिंगारपेटार नगरी भोलि मैले अफिस जाँदा मेरा दौंतरीहरूले तैंले कुन क्रिम प्रयोग गरिस् हँ भनेर सोध्नेछन्।
कस्तो अनौठो सुखको अंशियार भएँ म? आफ्नै परिवारसित पनि बाँडचुँड गर्न नसक्ने!
अबत सबै कुरा थाहा भयो नि होइन? मदन भण्डारीको निधनमा यतिबेला सारा देश रोइरहेछ। लाखौं युवाहरूको आँखाले निद्रा देवीलाई आफैं खेदेको छ। मान्छेको भोक मरेको छ। उत्साह समाप्त भएको छ। जीवनप्रतिको विश्वास टुटेको छ। उहाँको परिवार झन कत्ति रन्थनिएको होला? परिवार भन्दा ठूलो चोट उहाँको पार्टीमा परेको होला। उहाँको निधनले सिङ्गो पार्टीलाई नै टुहुरो बनाएको होला। उहाँको पार्टीसँग हाम्रो कुनै दुश्मनी छैन, उहाँको पार्टी टुहुरो भैदिंदा हामीलाई अतिरिक्त आमदानी थपिएको छ। उहाँको आफ्नो सन्तान किरियाको टालो पनि बेर्न नसक्ने गरी पछारिएको छ र हामी दुबै हातले अपुताली सोहोरिरहेका छौं।
पहिलोपल्ट मलाई लाग्यो – हामीले गर्ने काम सुन्धाराका मासु पसलेहरूको जस्तै हो। उनीहरू जति धेरै खसी काटियो त्यति धेरै खुशी हुन्छन्। हामी पनि जति ठूला मानिसहरू मारिए त्यति नै धेरै खुशी हुने रहेछौं।
के हाम्रो पेशामा संवेदना हुँदैन?
« Reply #4 on: March 21, 2018, 09:29:58 PM »
जेठ ८ गते
हिजो मैले तपाईंलाई छर्लङ्ग उघि्रएको दिनको उज्यालोमा रूँदै रूँदै हिंडेको देखें। म रोइरहेछु भन्ने तपाईंलाई थाहा भएको थियो? थिएन होला। बाटामा एक्लै हिँड्दा रूने कुरै भएन, कार्यालयमा उसै पनि अहिले रूनु बर्जित छ। त्यसैले म शवयात्राको किनारमा ठिङ्ग उभिएँ। मान्छेको त्यो समुद्रमा तपाईं पीडाले छटपटाइरहेको सुन्दर माछो जस्तो हुनुहुन्थ्यो मेरा लागि। हुन पनि मान्छे बगुन्द्रै भेला भएका थिए। एउटा मान्छेका नाममा यति धेरै मलामी हुन्छन्? अहँ, मैले त कल्पना पनि गरेकी थिइन। तीन लाख मान्छे सडकमा हिंडे भन्थे हाम्रा साथीहरू। हो? होला पनि। मैले तपाईंलाई डिल्लीबजारको ओरालोमा देखें।
तपाईंका आँखाबाट अटुट बगिरहेको आँशुले मेरो मुटु कटक्क खायो। कहाँबाट छिचोल्यो पिडाले तपाईंलाई? तपाईंका पाइलाहरू एक तालमा हिंडिरहेका थिए। तपाईंको हात पनि अघि पछि गरिरहेकै थियो। घरि घरि त्यो गालाको आँशु पुछ्न उठ्थ्यो। उठेको त्यो हात नेताको सम्मानमा सलामी दिन उठे जसरी तुरून्तै तल
थुप्रै मान्छेहरू क्वाँ क्वाँ रोइरहेका थिए। ठूला मान्छेहरू त्यसरी रोएको त मैले कहिल्यै देखेकी थिइन । आफू ओरिपरिको संसारलाई सुनसान हुनेगरी बिर्साइ दिनसक्ने कस्तो पीडा? केटा मान्छेहरू मात्र होइनन्, केटी मान्छेहरू पनि त्यत्तिकै रोइरहेका थिए। तपाईंलाई त थाहा भएन होला! रूनेहरूको लाम हेर्दै म धेरैबेर ओरालोको पिपलबोटको चौतारोमा उभिइरहेँ। आँखा रातो नभएको त एकजना पनि थिएन।
मदन भण्डारीकी आमाले आफ्नो छोराको निधनमा देश गंगा बगाएर रोला भन्ने कल्पना गर्नुभएको थियो? थिएन होला।
मानिस नसकिएको देख्ता एकछिनपछि म छक्क पर्न थालेँ। शवयात्राको शीर बानेश्वर चोकमा गएर बिलिन हुँदासम्म पनि ओरालोमा मानिसहरूको हुल सकिएको थिएन। मानिसहरू लाइनमा थिएनन्। भीड नै थियो डेढ दुइ किलोमिटर लामो। अहो! कति महान मान्छे? चार वर्ष अघिसम्म कसैले चिनेका थिएनन्। मैले कुनै अंग्रेजी पत्रिकामा (शायद न्युजविक हो कि!) कार्लमार्क्स लिभ्स इन नेपाल भनेर मदन भण्डारीलाई चित्रित गरेको अन्तरवार्ता पढेकी थिएँ। बेजोडको थियो त्यो अन्तरवार्ता। मदन भण्डारीका केही चुनावी भाषणहरू पनि मैले सुन्ने मौका पाएकी थिएँ। लेख रचनाहरू पनि लेख्नुहुन्थ्यो रे उहाँ। मैले ती पढेकी छैन।
त्यस्तो समय पनि हुँदैन। दाइले बेला मौकामा उहाँका रचनाको बारेमा बताउने गर्नुहुन्थ्यो। भक्ति थियो दाइको उहाँप्रति। हामी परिवारका सबैजना उहाँको अन्तरवार्ता असाध्यै रूची लिएर पढ्थ्यौं।
मदन भण्डारीले चाबहिलमा गर्नुभएको भाषण मैले सुनेकी थिएँ। अखबारमा चर्चा पनि धेरै भएको थियो। मान्छेले टिप्पणी गरेका थिए – मदन भण्डारीले राजालाई चुनौती दियो’ भनेर। तर मलाई त्यस्तो लागेको थिएन। अहिले पनि लागिरहेको छैन। मदन भण्डारीले राजनीतिको सीमा र संवैधानिक राजतन्त्रको मर्यादाका बारेमा टिप्पणी गर्नुभएको थियो र ठीकै ढङ्गले गर्नुभएको थियो भनेर हाम्रा पाका सम्पादकले पहिलो सुनाइमै हाम्रा सामू आफ्नो निष्कर्ष पस्किनु भएको थियो। त्यो भाषण क्यासेटमा भरिएर हाम्रो कार्यालयमा आएको थियो। त्यतिबेलै उहाँले आफ्नो प्रतिकृया दिनुभएको थियो। म त सम्पादकीय शाखाको कर्मचारी थिइन, तर म उहाँकै टेबल अघिल्तिर पुगेकी थिएँ। त्यतिबेला उहाँ आफ्ना सहकर्मीहरूलाई सुनाउदै
हुनहुन्थ्यो, “कस्तो चाहिने जति शब्दहरूलाई थुङ्गा थुङ्गा बनाएर वाक्यहरूको माला उन्न जान्ने मानिस रहेछ यो! अबदेखि यसको भाषण सबै जस्ताको तस्तै लेराउनु।”
त्यतिबेला त मैले न प्रतिकृया दिन सकेकी थिएँ, न थप कुरो सोधेर अतिरिक्त ज्ञान संकलन गर्नसकेकी थिएँ। ठूला मानिसको कुरो मेरो अध्ययनशील दिमागमा एउटा अर्को शिक्षा बनेर पसेको थियो।
तैपनि के हो के हो लागेर मैले बेलुकाको साँझमा मदन भण्डारीको भाषण र हाम्रा सम्पादकको प्रतिकृयालाई जोडेर भाषणको वास्तविक अर्थ के हो भनेर सोधेकी थिएँ। त्यतिबेला दाइले भन्नुभएको थियो, “राजाले राजनीतिमा सकृयतापूर्वक भाग लिने हो भने जनताले मानसम्मानका साथ शीरमा राखेको राजसंस्थाको परम्परालाई परित्याग गरेर राजा, जनताको घरदैलोमा जानुपर्छ, निर्वाचनको प्रकृयामा समाहित हुनुपर्छ, राजसंस्थाका रूपमा आफूले प्राप्त गरेका सबै सुविधाहरूलाई पूर्णरूपमै तिरस्कार गर्न सक्नुपर्छ र जनताका छोरा अरू राजनीतिक कार्यकर्ताले बाँचेको जस्तो जीवन बाँच्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। ”
यो त चुनौती होइन। यसलाई राजनीतिको राजमार्ग भन्नुपर्छ बरू। संवैधानिक राजाले राजनीतिमा भाग लिएको कुरो कहाँ पढ्न पाइन्छ विश्व इतिहासमा?
राजनीतिमा बेरिएपछि मान्छेको आँखाको पानी सुक्दो रहेछ। त्यसैले त्यो पूर्वाग्रही बन्छ होला। हुनत मेरो राजनीतिको ज्ञान भनेको घरमा दाजुको भाषण र कार्यालयमा साथीहरूको टिप्पणी मात्रै हो। गहिराइमा गएर राजनीति गर्ने न सोच रह्यो न रहने छ। यो त खालि मदन भण्डारीको शवयात्राको दर्शक भएर पिपलबोटको चौतारोमा उभिंदा अन्तरिक्षबाट उडेर आएको भावनाको सानो टुक्रो मात्र हो।
दुइ घण्टाका लागि अफिसबाट बाहिर निस्किएकी थिएँ म। ट्राफिक जाम भनौं भने शहरमा ट्राफिक नै थिएन। गाडीहरूको कहाँ कल्पना गर्ने? मान्छे बाहेक सडकमा केही छँदै थिएन। एक मन लाग्यो – शवयात्राको पछिपछि लागौं कि! मेरो पनि एक थोपो श्रद्धान्जली मदन भण्डारीका नाममा पोखिने छ। तर श्रद्धान्जली दिन पनि त स्वतन्त्रता चाहिन्छ। हाम्रा मालिकहरूले पालैपालो दशरथ रङ्गशालामा प्राणरहित सुताइएको मदन भण्डारीको अन्तिम दर्शन गरेका थिए, फूल र माला चढाएका थिए। रङ्गशालामा नदी जसरी मानिसहरू बगिरहेका छन् भन्थे हाम्रा संवाददाताहरू। मान्छे अश्रुपुरित नयनले मदन भण्डारीलाई श्रद्धान्जली दिइरहेका हुन्थे – हाम्रा पत्रकार साथीहरू त्यसलाई रूपैयाँमा अनुवाद गरेर हाम्रो स्वार्थरक्षा गरिरहेका हुन्थे।
तीन दिनसम्म अन्तिम दर्शनका लागि मदन भण्डारीको शवलाई रङ्गशालामा राखियो। हजारौं हजार नेपाली पाइलाहरू त्यहाँ पुगे र ती प्रत्येक पाइलाले हामीलाई केही रूपैया दान गरे।
बुझ्नु भो होइन? तिनीहरूको समाचार छापेर हामीले बढी पत्रिका बिकायौँ, हामीले बढी विज्ञापन संकलन गर्‍यौँ।
पिपलको बोटमुनि उभिन पाउँदा आँतले अघाउँजी अक्सिजन पायो होला। त्यसैले त्यो एकछिन रङ्गशालामा बरालिइरह्यो। नाफाको सानो हिसाब सकेर त्यो ओरालोको पिपल बोटको डीलमा आइपुग्यो।
शवयात्राको लस्कर सकिएको थिएन। तर त्यो धेरै पातलो भएको थियो। ‘अब सकिन लागेछ,’ मनमनै अनुमान गरेँ। आफूले जानु पूर्वैतिर थियो। मलामीहरूको अन्तिम लहरमा समाहित भएर म पनि बानेश्वरतिर लागें।
म मलामी थिइन, त्यसैले मैले गौशालातिर जानु थिएन। बानेश्वरको चोकमा पुगेपछि मलामीहरू देब्रेतिर लागे, म दाहिनेको बाटो समातेर घरको आँगनमा ओर्लिएँ।
घरमा भित्ताहरू बाहेक अरू को थियो र? आमा बिहानै गाउँ जानुभएको थियो। म गहु्रंगा पाइला चाल्दै अफिसतिरै लागें।
म अफिसमा पुग्दा अझै संवाददाताहरू आइसकेका थिएनन्। अर्थात् समाचार बन्ने क्रम आरम्भ भैसकेको थिएन। रङ्गशालाको रिपोर्ट लिन गएका संवाददाताहरूसँग संपादकज्यू कुराकानी गरिरहनु भएको थियो। रिपोर्टिङ्ग गर्ने मेरो काम थिएन। तर संपादकले अह्राउनु भएको काम पुरा गरी आएकी हुनाले म त्यहाँ पुगेकी थिएँ। संवाददाताको रिपोर्ट सुनेपछि संपादकले लामो सुस्केरा काढ्दै भन्नुभयो – “मदन भण्डारी न राजा थिए, न प्रधानमन्त्री नै। तर प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा उनी नै रहे।
मृत्युमा उनले सबैको मलामीलाई उछिने। नभूतोः नभविष्यति।”
साँझमा अफिस फर्किएका संवाददाताहरूले आफूले देखेको घटनाको विवरण सुनाए। समाचार बनाउने ‘मुड’ बनेको थिएन कसैको। आज साँच्चै शोकाकुल थियो हाम्रो कार्यालय। आज क्याण्टिनले पनि सबैलाई कालो चिया मात्र खुवायो। “जीवित हुँदा पनि मदनजीले नै हामीलाई सबैभन्दा बढी समाचार
दिनुभयो। हामीलाई जीवनभरि नै ऋण लगाउनु भयो। उहाँको निधनले पनि फेरि हामीलाई समाचारको सागरमा सटक्क माथि निकाल्यो। यतिका दिन समाचारको केन्द्र बन्नुभएका मदन भण्डारी हामी सबैका लागि श्रद्धा र सम्झनाका पात्र हुनुहुन्छ। आउनुस्, आज हाम्रो सम्पादकीय टिम, उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धान्जली
अर्पण गरौं।” प्रमुख संवाददाताको यो भनाइपछि कोठा एकछिनका लागि स्तब्ध भयो। कार्यालयमा संवेदनाको सुस्केरा छिर्यो।
व्यक्तिको संवेदना कार्यालयको सासमा मिसिएको थियो। सबैको मन दुखेको थियो। तर काम त गर्नैपर्थ्यो। साथीहरू आफ्नो काममा लाग्नुभयो। म भुईंतलाको चिसोमा झरें।
भुईंतलामा सन्नाटा पोखिएको थियो। त्यो हिजो अस्ती भन्दा चिसो थियो। साँच्चै थियो कि मेरो मनले त्यसलाई चिस्याएको थियो? थाहा छैन। मैले अझै डेढ घण्टा बिताउनु थियो। अरू बेलाको डेढ घण्टा केही मिनेट जस्तो लाग्थ्यो। टेलिफोनको किरकिरलाई अलग अलग कोठाहरूमा सरूवा गरिदिंदा र अगाडि उभिएका आगन्तुकको प्रश्नको जवाफ दिंदा सेकेण्ड, मिनेट र घण्टा बितेको पत्तै हुँदैनथ्यो। तर त्यो ओरालो लाग्दाको दिन, पट्टाइलाग्दो भयो। आगन्तुक त आउदै आएनन्। डेढ घण्टामा एक जना पनि आएनन् । फोनको घण्टी पनि बजेन भन्दा हुन्छ। डेढ घण्टामा जम्मा जम्मी दुइटा फोन आए। यस्तो त जागिर खाएको दिनदेखि आजसम्म मैले जानेकै थिइन।
हिंड्ने बेलामा मनले सोध्यो – के आज काठमाण्डौ सिङ्गै आर्यघाटमा ओइरिएको छ? छोटो बाटो चाँडै बित्थ्यो सधैं। आज बाटोले पनि समय खायो। निदाउन निदाउन खोजेको दिन
धुरूधुरू रोइरहेछ जस्तो लाग्यो। मन झन झन बिरसिलो हुँदै गयो। घरमा आएँ। आमा आइसक्नु भएको रहेछ। ब्यबहारको फन्दाले होला – उहाँले मृत्युको शोकलाई बिर्सन थाल्नुभए जस्तो लाग्यो। ‘म पनि ब्यवहारकै फन्दामा पर्न पाए हुन्थ्यो,’ मेरो मनले भन्यो, ‘सानातिना काममा अलमलिन पाए, ठूला दुःखहरूको पीडा सम्भि्कइरहन त पर्दैनथ्यो कि!’
झमक्क रात परेपछि बुवा घरभित्र छिर्नुभयो र बैठक कोठामा थकित शरीर बिसाउँदै भन्नुभयो, “गौशाला भन्दा उता जानै सकिन। जताततै मान्छे मात्रै छन्। विवेकको नाकमुख देखिन। भित्रै पसेको होला । अरूको जे गत, त्यसको पनि सोही गत भन्ने सोचेर म चाहिं गौशालाबाटै फर्किएँ।”
“आज संस्कारको दिन, बेलुका अलिनो खाने कि!” आमाले सामाजिक मर्यादाको सम्झना गराउनुभयो। मलाई लाग्यो – यसो भनेर आमा कुनै सनातन धर्मको पालना गरिरहनु भएको छैन। आफूले नजीकबाट चिनेको नेताको दाहसंस्कारमा श्रद्धान्जलीको फूल चढाउने विशिष्ट शैलीलाई उहाँले अबलम्बन गर्न खोजिरहनु भएको छ।
“आज केही नबनाउ, केही खान मन छैन,” बुवाले आमासँग भन्नुभयो, “उभिने ठाउँ कतै छैन पशुपतिमा। कत्रो सम्मान! नेपालका न कुनै राजाले पाए, न कुनै प्रधानमन्त्रीले पाए। भविष्यमा पनि यस्तो त नहोला। सामान्य नागरिक भएर राज गरे मदन भण्डारीले नेपाली राजनीतिमा। महान हुन मदन भण्डारीलाई कुनै पद चाहिएन, कुनै ओहोदाको चाँदतोडा भिर्नु परेन।” बुवाले यसरी राजनीतिको सम्मान गरेको त्यस अघि मैले सुनेकी थिइन। त्यसैले म बुवालाई हेर्न एकोहोरिएकी थिएँ। बुवाले मतिर फर्किंदै भन्नुभयो, “देशले यति धेरै सम्मान गरेको इतिहास पुरूषको श्रद्धा गरौं हामी सबै। आज चुलो नबालौं।”
तपाईंहरू अझै आर्यघाटबाट फर्किसक्नु भएको छैन होला। दाई पनि त आउनु भएको छैन। दाइलाई पर्खिएर साँझ, ढोका बाहिरको पींढीमा बसिरह्यो। घरि घरि त्यो जुरूक्क उठेर आँगनको
उज्यालोमा दाइलाई नियाल्थ्यो, उहाँको छायाँ नदेखेपछि त्यो टुसुक्क ढोकाको आडमा बसेर घडीको सुइतिर हेर्न थाल्थ्यो।
आज न पढ्न मन लाग्यो नत लेख्न नै। दाइलाई पर्खिएर हामीले केहीबेर बितायौं। उहाँ नआउनुभएपछि आमाले हामीलाई ग्लुकोज पानी खान दिनुभयो। आज घरमा कसैलाई खान मन लाग्ने छैन भनेर उहाँले दिउँसै सोच्नुभए जस्तो लाग्यो।
पानी खाएपछि पनि हामी धेरैबेर दाइलाई पर्खेर बसिरह्यौं। अहँ, दाइ आउनु भएन। के साँझ पर्न मध्यरात चाहिन्छ आज?
« Reply #5 on: March 23, 2018, 04:21:16 AM »
जेठ २७ गते
आज एउटा नमिठो घटना घट्यो अफिसमा।
चर्किएको मध्यान्ह थियो। साढे बाह्र बजेको थियो। हाम्रो एकजना स्तम्भकार आउनु भयो। उहाँसँग मेरो राम्रो चिनजान थियो। त्यसैले मैले नै पहिले नमस्कार गरेँ।
“नमस्कार सर,” उहाँको अनुहार शान्त थियो, सौम्य थियो। उहाँले नजिकै आएर सोध्नुभयो, “तिमी सञ्चै छ्यौ? गाउँतिर आउन छोडिहाल्यौ। भेटघाटै छैन। आजभोलि दाई कता?”
अर्थात्, उहाँ र म पुराना चिनारू थियौं। केटाकेटीमा उहाँले मलाई पढाउनु भएको थियो। दाइ त्यतिबेला एस.एल.सी. दिने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो र म सात कक्षाको परीक्षा दिएर बसेकी थिएँ। उहाँले त्यसैबेला आफू स्कूलमा पढाउन आएको कुरो हामीलाई सुनाउनु भएको थियो। गाउँहरू त्यतिबेला उपत्यकामा पनि पहाडतिरकै जस्ता हुन्थे। उहाँले हाम्रा बुवाआमाहरूलाई समेत चिन्नुहुन्थ्यो। मैले एस.एल.सी दिइसक्दा पनि उहाँ त्यही स्कूलमा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। पछि दाइ र म क्याम्पस पढ्न शहर आउँदा पनि उहाँसँग हप्तामा एकाध पटक भेट भैहाल्थ्यो, किनभने हामी विदाको दिन आयो कि गाउँतिर दौडिइहाल्थ्यौँ। पछि उहाँ राजनीति र लेखनतिर लाग्नुभयो। केटाकेटीमा हामीलाई साह्रै माया गर्ने गुरू हुनुहन्थ्यो उहाँ। त्यसैले पनि होला, उहाँप्रति मेरो सम्मानभाव अलिक बढी नै थियो।
“दाइको सरूवा भयो,” मैले भनें “अहिले हामी घरमा तीन जना मात्र छौं।”
“आमा बुवालाई मेरो नमस्कार सुनाउनु है,” उहाँले मायालु पाराले भन्नुभयो र सोध्नुभयो, “तिम्रो जागीर यही टेबलमा स्थायी भयो कि क्या हो?”
“त्यस्तै जस्तो छ,” मैले पनि मन खोलेर भनें, “जागीरमा माथि जान पनि उचालिदिने कोही हुनुपर्दो रहेछ। कामले माथि जान सकिंदो रहेनछ। चाकरी गर्न मनले नदिएपछि मच्ची मच्ची थच्ची हुँदो रहेछ।”
“सम्पादकजी माथि हुनुहुन्छ?” सरको सोधाइको आवाज सुन्दा मलाई अलिक अनौठो लाग्यो। सर आफ्नो भावना लुकाउन जान्नुहुन्न। त्यसैले उहाँको खुशी, रिस, आक्रोस जस्ताको तस्तै उहाँको अनुहारमा पोतिइहाल्छ।
“केही भयो र सर?” मैले डराइ डराइ सोधें।
“यिनीहरू कस्तो बदाम ब्यापारी जस्ता रहेछन्! लेखक खालि पैसाका लागि लेख्दैन। यिनीहरूले एउटा लेखको हजार रूपियाँ दिएका छन् भन्दैमा लेखक यिनीहरूको खेलौना हुन्छ? हुदैन। लेखकको छातिमा स्वाभिमानको आगो बलिरहेको हुन्छ। निरन्तर बलिरहने ज्योति जस्तो। त्यसैले उसँग आत्मसम्मान हुन्छ।
पैसा नाथे के हो? आज हुन्छ भोलि हुँदैन। भोलि हुँदैन, पर्सी हुन्छ। तर मान्छेको सम्मान त्यति सजिलरी आउने र जाने हुँदैन। यिनीहरू त सम्झौता पालन गर्न पनि जान्दा रहेनछन् ए!”
असाध्यै नमिठो लाग्यो। आफ्नो सर भएर हो अथवा आफ्नो गाउँले दाई भएर हो थाहा छैन। उहाँको भनाइ सुन्ने बित्तिकै मलाई लाग्यो – हाम्रै तर्फबाट उहाँको अपमान हुने कुनै काम भएको छ।
उहाँलाई अखबारमा लेख्न लगाउन महाभारत नै भएको थियो। मेरो र उहाँको चिनजान छ भन्ने त त्यहाँ धेरैलाई थाहा थियो। पहिलोपल्ट अखबारको प्रमुख रिपोर्टरले मसँग लेखका लागि सरलाई मनाइदिन आग्रह गर्नुभयो। मलाई पनि राम्रै लाग्यो। कम्तिमा हप्तामा एक दिन राम्रो कुरा पढ्न त पाइने भयो भन्ने लाग्यो। त्यसैले म त्यसको लगत्तैको शनिबार गाउँमा गएँ। उहाँ गाउँमै बस्नुहुन्थ्यो।
“तिम्रा मालिकहरू लेखकको, सिर्जनाको सम्मान गर्न जान्दैनन्,” उहाँले मलाई सम्झाउदै भन्नुभयो,“उनीहरू पत्रकारिता गरिरहेका छैनन्, उनीहरू त पत्रकारिताको ब्यापार गरिरहेका छन्। म जस्तो मान्छे कसरी ब्यापारमा टिक्न सक्छु र? ब्यापारै गर्ने भए त खेतमा धान थियो, बारीमा तरकारी थियो, आठ दश लिटर दुध दिने भैंसी पनि थियो। खै मैले केही गर्न सकिन। राजनीतिमै पनि म दासतातिर लाग्न सकिन।
दुःख भए पनि मैले आत्मसम्मानको राजनीति रोजें। त्यसैले नानी, हुन्देउ, म त्यहाँ लेख्न सक्दिन। सरले मान्नुभएन भन्देउ, कुरो सकिइहाल्छ।”
आफ्नो सरसँग बहस गर्नु त हुन्थेन, तैपनि मनले जितेर मैले भनें, “सर, मान्छे जस्ता भए पनि अखबार त अक्षरको खानी हो। एकैचोटी पचास साठी हजार मान्छेले तपाईंको बिचार पढ्न पाउछन्, तपाईंको कुरो तपाईंकै भाकामा जान्न पाउछन्। लेख्दा के बिग्रन्थ्यो र!”
प्यारी बहिनीको नाक समातेर हल्लाए जसरी उहाँले मेरो नाक समाउदै भन्नुभयो, “चाँदनी, तिमी ठूली भयौ, तिमी जागिर खाने भयौ, केही दिनपछि हामी डोलीमा राखेर तिमीलाई घर पठाउछौं। तर तिमीले पूंजीपतिको कालो मन चिनेकी छैनौ। तिनीहरू लेखक कलाकारको मर्यादा राख्न जान्दैनन्।”
“त्यस्तो दिन आएछ भने चटक्कै छोडिदिने नि। आखिर सरले त्यहाँ जागिर खाएको हेाइन क्या रे! हामी जागिरेले पो जस्तो पनि भुक्तमान सहनु पर्छ। सरले त त्यो कार्यालयतिर मुखै नफर्काए पनि हुन्छ।
पारिश्रमिक पनि घरैमा पठाउन लाइदिउँला। अथवा मै बुझेर ल्याइदिउँला,” डोली चढाएर विदा गर्ने माइतिको ब्यवहार पाएकोले होला मैले झन बढी लाडे पल्टिदै अनुरोध गरेँ।
“अपमान महसुस भएकै दिन म त लेख्न छोडिदिउँला। तर त्यतिबेला तिमी जस्ता भाइबैनीहरू धुरूधुरू रूनेछौ। तिमीहरूलाई मैले रूवाउनु हुँदैन।”
“हामी रून्नौ। सरको गर्व निहुरिएन भनेर बरू हामी आफ्नो पनि शिर ठाडो पार्नेछौं।”
मेरो जिद्दी देखेर सर छक्क पर्नुभो।
“आज तिमी जाउ,” सरले मेरो टाउको मुसार्दै सम्झाउनु भयो, “सरले मान्नु भएन भन। भविष्यमा तिम्रा लागि भए पनि म लेखुंला। मैले राखेका सबै कुराहरू पुरा हुन्छन् भने म लेख्न सक्छु। तर अहिले उनीहरूसँग यी कुनै कुरा नगर्नु। सरले मान्नुभएन मात्र भन्नु।”
मेरो काम हुनेभयो भनेरै म फर्किएँ। त्यसदिन लेख सम्पादकले मलाई तीन चार चोटी खोजेछन्।
शायद उनी काम भैहाल्छ भनेर ढुक्कै थिए। काम भएन भन्न मलाई मन लागेन। त्यसैले साँझमा मैले उनलाई फोन गरिन। भोलिपल्ट कार्यालय गएको एकछिनपछि सम्पादकले के भयो भनेर फोनमै सोध्नुभयो।
मैले पनि सरले मान्नुभएन भन्ने जवाफ दिएँ। उहाँले त्यसपछि आफ्नो कोठामा बोलाएर कुरा उक्काउनु भयो । ‘सरले किन लेख्न मान्नुभएन?”
यस्तो प्रश्नको लागि त म तयार थिइन। तर पनि कुनै न कुनै उत्तर त दिनुपर्थ्यो। त्यसैले मैले उत्तर मिलाएँ, “सर, उहाँ आजसम्म कसैका सामु दब्न मान्नुभएको छैन। शायद उहाँ आफ्नो बाहेक अरू कसैका सामु शीर पनि निहुराउन मान्नुहुन्न। अखबारमा लेख्न थालेपछि मालिकहरूले हेप्छन्, सम्पादकको हप्कीदप्की हुन्छ भन्ने उहाँलाई लागेको हुनसक्छ। मैले धेरै कर गरेँ, हुन्देउ नानी, मलाई फुर्सद छैन मात्र भन्नुभयो। उहाँको फुर्सद नहुने त कुरो छैन। शायद मैले भनेको नपत्याएको हो कि!”
“त्यस्तो त किन हुन्थ्यो र? मान्छेहरू आफैं लेख छापिदे भन्न आउछन्।”
“तर उहाँ त्यस्तो होइन सर। उहाँले छापिदे भनेर कसैलाई भनेको मलाई थाहा छैन। सबै उहासँग माग्नै जान्छन् र माग्न जानेलाई रित्तै फर्काएको पनि मलाई थाहा छैन। त्यसैले सरहरूले आफैं कुरा गर्दा शायद उहाँले लेख्नुहुन्थ्यो कि!”
“ठीक छ, म कुरा गरौंला।”सम्पादकले सरसँग कुरा गर्नुभयो। तर कुरो मिलेन। मैले सम्पादकको तिक्तता सुनें, “बडो अप्ठेरो पारिदिनु भयो। मप्रति तपाईंका मालिकको ब्यवहार अपमानजनक हुदैन भन्ने ग्यारेण्टी गर्नुहुन्छ? भनेर अवाक् पारिदिनु भयो। मैले कहाँबाट ग्यारेण्टी गर्नु! आफैंले पचासौं पटक अपमानित हुनुपरेको छ। गजबको मान्छे हुनुहुदो रहेछ। आत्मसम्मान भन्दा अहंकार बढी भए जस्तो।”
कुरो बिग्रिने पो हो कि भन्ने डर मलाई लागेको थियो। मैले सरलाई बेलुका फोनबाट कनकन पनि गरेँ। “नानी, जहाँ सम्मान हुँदैन, त्यहाँ म जान सक्दिन। तिमीलाई थाहै छ। सम्पादकले मेरो आत्मसम्मान सुरक्षित हुने ग्यारेण्टी गरेनन्। म कसरी लेख्न सक्छु र? तिमी आफ्नो प्यारो सरको शीर निहुरिएको देख्न सक्छ्यौ?”
त्यो त म देख्न सक्दिनथें। तर सरले लेख्नै पर्थ्यो।
त्यो दिन पनि राती नै थियो। सरले आउने हप्तादेखि लेख्ने कुरो मैले थाहा पाएँ। सरले नै फोनमा सुनाउनु भयो मलाई।
कम्पनीका मालिकले सरलाई रात्रीभोजको निम्तो दिएका थिए एउटा ठूलो होटलमा। डेस्क प्रमुख र सर आमन्त्रित हुनुहुदो रहेछ। सरले दिउँसै छक्क परेको स्वरमा मलाई सोध्नुभएको थियो, “नानी मलाई एउटा ठूलो होटलमा खाना खाने निम्तो दिएका छन्। तिम्रो कम्पनिका मालिक स्वयम् आउने रे। मेरो त मुटु नै ढक्ढक् गर्दैछ। उही लेख्ने कुराका लागि त होला।”
“सर, साह्रै अररो भएर नाइ नभन्दिनु होला,” मैले अनुरोध गरेँ, “आफ्ना सबै शर्तहरू राख्ने मौका यही हो।”
त्यो रात्रीभोजमा कुरो मिलेको थियो। आफूसँग नसोधी ‘कमा’ पनि तल माथि गर्न नपाइने शर्त सरले राख्नुभएछ। त्यो पनि हुने भएछ। सरको बार र टिप्पणी रहने स्थानका बारेमा पनि सम्झौता भएछ।
सरले मलाई भन्नु भएको थियो – “हामी लेखकहरू कानूनका कुरा जान्दैनौं। यो एउटा भलादमी सम्झौता हो, तर वाध्यकारी सम्झौता हो। म हप्ताको एउटा बारमा लेख्छु, त्यसमा कमा पनि संशोधन गर्न पाइदैन, मेरो लेख अनिवार्यतः सिरानमा हुनुपर्छ, मेरो पारिश्रमिक म माग्दिन, समयमा पाइन भने अर्को अंकदेखि लेख्दिन, यो लेखाइ मेरो आवश्यकता होइन, तपाईहरूको अनुरोध हो भन्ने तपाईंहरू सबैले बुझ्नु पर्छ। कुनै दिन मेरो मन अपमानित भयो भने म सामान्य सूचना दिएर लेखाइबाट अलग्गिन्छु।”
हामी सबै खुशी भयौं। सरले लेख्न थाल्नुभयो। दाइले पहिलो अङ्कको लेख पढेपछि खुशी भएर विराटनगरबाट फोन गर्नुभयो। भन्नुभयो उहाँले, “केटी अब तिमीहरूको पत्रिका पनि पढ्न पर्ने भयो, सरले नियमित लेख्ने हुनुभएको हो?”
एक वर्ष, सर र कम्पनी बीच राम्रै सम्बन्ध रह्यो। हामीले पनि राम्रो लेख पढ्ने मौका पायौं।
अखबारको विस्तार पनि फैलियो। हामी सबै खुशी भयौं।
दशैंमा सरले दश हजार पेश्की लिनुभएको थियो। त्यसलाई हामी सबैले स्वभाविक ठानेका थियौं।
बेलामौकामा त्यस्तो भैरहन्थ्यो। त्यसले कुनै नकारात्मक परिणाम निकाल्ला जस्तो पनि हामीलाई लागेको थिएन।
तर कुरो बिग्रिएछ। सरको लेख पुछारमा छापिएछ। अब कुरो बिग्रियो भन्ने हामीलाई लाग्यो।
“चाँदनी,” सरको फोन आयो। कम्पनीको इमानदार कर्मचारी भए जसरी मेरा खुट्टाहरू कामे।
“चाँदनी, देख्यौ बगरे काइदा! मैले दश हजार पेश्की के लिएको थिएँ, लात हानिहाले तिनले। अब
जति अपमान गरे पनि मैले सहनै पर्ने भयो। कित मैले पैसा खोजेर ऋण फिर्ता दिनुपर्ने भयो कित किचिक्क निहुरिएर लेखिरहनु भयो। तिम्रा सम्पादक कोठामा छन्?”
सम्पादकजी आउनु भएको थिएन। तर पनि मैले घरैको फोन दिएर उहाँहरूको सम्पर्क मिलाइदिएँ। आधा घण्टामा उहाँहरूको कुरो सकियो होला भन्ठानेर मैले सरको फेान नम्बर थिचें।
“कसैले बीचमा बदमासी गर्‍यो, यो गल्ती नै हो, मेरो समस्यालाई यहाँले बुझिदिनु पर्‍यो, अब यस्तो हुनेछैन, भन्नुभयो।”
“माफ मागेपछि त लेख्नै पर्छ सर, फेरि यस्तो दोहोरियो भने चटक्कै छोड्दा पनि हुन्छ।” सरले लेख्नुभएको थियो। त्यसपछि बीचमा दुइटा पाठक प्रतिकृयाहरू सरको लेखको विरूद्धमा
छापिएका थिए। उहाँले दुबैपटक लेख्दिन भन्नुभएको थियो। तर त्यसलाई पनि हामीले नै सामसुम पारेका थियौं।
आज के भयो थाहा थिएन। आज त उहाँको लेख छापिने दिन पनि थिएन।
“सर, केही भयो फेरि?” मैले फेान खेलाउदै सोधें।
“अब सबै समाप्त भयो,” उहाँले गम्भिर स्वरमा भन्नुभयो, “आज यिनीहरूको अखबारमा मेरा विरूद्धमा दुइटा टिप्पणी छापिएका छन्। पहिलो हो पाठक प्रतिकृया। त्यो पाठक प्रतिकृया नक्कली हो। मेरो आफ्नै सालोको नाममा त्यो प्रतिकृया छापिएको छ। शायद नक्कली प्रतिकृया लेख्ने कम्पनीको भाटलाई मेरो बिहे अन्तरजातिय हो भन्ने थाहा थिएन होला। त्यसैले नमिल्ने जाती र थरको प्रयोग गर्दा त्यसले मेरै घरतिर पनि तान्नसक्छ भन्ने तिनलाई थाहा पाएन। सँगैको ब्यङ्ग कोलममा पनि जसको जौ खाने उसैको जुँगा उखेल्ने भनेर मैले यो अखबारका बारेमा गरेको टिप्पणीलाई लिएर मनपरी लेखिएको रहेछ। मैले आफ्नो लेखको गणना गरेर पैसा फिर्ता लिनु भनेको छु।”
“कम्पनीका कोही ठूलाबडासँग कुराकानी भएन सर?” मैले डराई डराईं सोधें।
“फोनमा कुरा गरेँथें मैले। यस्ता कुरालाई ब्यक्तिगतरूपमा लिइदिनु भएन भन्दै थिए। मैले हुँदैन भने। अहिले सम्पादकलाई जानकारी गराइदिउँ भनेर आएको। म अब यो पत्रिकामा लेख्दिन।”
सरको मन बेस्सरी पिरिएको थियो। त्यो जलेको थियो। त्यसैले मैले फेरि पनि लेखिरहनु पर्छ भनेर थप अनुरोध गर्न सकिन।
मैले सम्पादकको नम्बर थिचें। टेलिफोन उठ्यो। मैले सर आउनु भएको कुरो बताएँ। सामान्यतयाः भेटघाटको समय पहिले नै मिलाउने चलन थियो। आउनेहरू यतिबेला आउछु है भनेर फोनमा समय लिने गर्थे। त्यसैले सम्पादकले नाईं पो भन्नुहुने हो कि भन्ने शंका लागेको थियो। तर अनौठो! उहाँले सजिलरी भन्नुभयो, “माथि पठाइदेउ न!”
सर भर्‍याङ चढ्नु भयो। मलाई चौ चौ लागिरह्यो। उसो त सम्पादकको कोठामा दिउंसो पसेको मानिस लामै समय गफ गरेर फर्किन्थ्यो। तर आज मलाई लाग्यो – सर तुरून्तै फर्किनु हुन्छ र सम्पादकसँग खस्रो मसिनो गरेरै फर्किनु हुन्छ।
नभन्दै त्यस्तै भयो। पन्ध्रै मिनेटमा उहाँ भर्‍याङबाट तल झर्नुभयो। उहाँप्रति सद्भाव जाहेर गर्न म बसेको ठाउँबाट जुरूक्क उठें। भुर्इंतलामा कोही थिएनन्। म भर्‍याङको नजिकै गएँ।
“के भयो सर?” मैले सकेजति विनम्र भएर सोधें।
उहाँ खिसिक्क हाँस्नुभयो। अघि जाँदाको आगो उहाँको अनुहार र मन दुबै ठाउँमा निभिसकेको रहेछ । मेरो मन चङ्गा भयो।
“चाँदनी, मैले यो अखबारमा अब नलेख्ने भएँ,” उहाँले गर्वोन्मत्त स्वरमा घोषणा गर्नुभयो। मलाई नमिठो लाग्यो। हप्तामा एकदिन पाइने रमाइलो पनि श्रोतमै सुक्ने भएछ।